उच्च शिक्षा र फोरस्क्वायर क्रान्ति | Martech Zone
सोमबार, अक्टोबर 11, 2010 शनिबार, सेप्टेम्बर 26, 2015 एडम सानो
विश्वविद्यालयहरू सामाजिक मिडिया मा बट लात छन्! तिनीहरू ट्विटर, फेसबुकमा छन् र भौगोलिक स्थानहरू फोरस्क्वायर प्रयोग गर्न थालेका छन्। किन यो काम गर्दैछ? प्राय: सम्भावित विद्यार्थीहरूले तिनीहरू क्याम्पसमा भ्रमणमा कता स्कूल जाने भनेर निर्णय लिन्छन्। त्यसैले पहिलो भ्रमणको क्रममा राम्रो प्रभाव पार्नु महत्त्वपूर्ण छ। फोरस्क्वायरले विश्वविद्यालयहरूलाई सम्पूर्ण नयाँ तरीकाले क्याम्पस अन्वेषण गर्न अनुमति दिन्छ। अनुप्रयोगहरू सुझावहरू छोड्न प्रयोग गर्न सकिन्छ निश्चित गर्न यो सुनिश्चित गर्न कि सम्भावितहरूलाई कहाँ जानुपर्दछ र भ्रमणको बेला के गर्ने। विश्वविद्यालयहरूका भू-स्थान अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नको लागि अन्य कारणहरू:
थोरै ज्ञात तथ्यहरू साझा गर्नुहोस्
स्थलचिन्हहरू, भवनहरू र ठेगानाहरूको बारेमा जानकारी साझा गर्नुहोस्
प्रश्न सोध्नु अघि उनीहरूलाई सोध्नु अघि (सुरक्षा, नेविगेशन)
क्याम्पस अन्वेषण गर्न नयाँ विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पुरस्कार र ब्याजहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्
स्कूलको परम्परा साझा गर्नुहोस्
विद्यार्थीहरू क्याम्पसमा बाहिर समुदायमा डूबाउनुहोस्
पूर्व छात्रों बाट सल्लाह प्राप्त गर्नुहोस्
युनिभर्सिटी सेटिंगमा फोरस्क्वायरको लागि अर्को प्रयोग विद्यार्थीहरू “पुन: भ्रमण क्याम्पस” को लागी हो। फोरस्क्वायरले उनीहरूलाई स्नातक गरे पछि के हुँदैछ भनेर पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। उदाहरण को लागी, एक फिटकरी को लागी जाँच र एक नयाँ भवन देख्नुहुनेछ। बिभिन्न परिदृश्य केही व्यक्तिहरूका लागि विश्वविद्यालयमा पुन: भ्रमण गर्न महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। समय भनेर एक बताउँछ। त्यो सुविधामा थप्दै एक अनुप्रयोग हो कि तिनीहरूलाई नयाँ भवन उद्देश्य र "नयाँ" ईतिहास बताउँदछ। यसले फिटकरीलाई सम्पर्कमा रहन मद्दत गर्दछ र हराएको महसुस गर्दैन।
हार्वर्ड एक स्कूल हो जसले फोरस्क्वायर प्रयोग गर्दै छ। तिनीहरू क्याम्पसमा गर्न ऐतिहासिक जानकारी र रमाईलो चीजहरू प्रदान गर्दछन्, जुन सबै अन्तर्गत फोरस्क्वायरमा फेला पार्न सकिन्छ हार्वर्ड पृष्ठ हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा यसका धेरै भवनहरूको लागि फोरस्क्वायरमा धेरै पृष्ठहरू छन्।
विश्वविद्यालयहरू धेरै घटनाहरू हुन जान्छन्। यी सबै घटनाहरू साझेदारी गर्न सहयोगको लागि फरक अनुप्रयोग हो Whrrl.यो अनुप्रयोगले प्रयोगकर्ताहरूलाई चेक इन गर्नका साथै घटनाको बारेमा साझेदारी गर्न फोटो र सन्देशहरू अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ। यस अनुप्रयोगसँग नयाँ विद्यार्थी र छात्रहरू ल्याउने क्षमता छ। तिनीहरू उनीहरूको साझेदारी अनुभवहरू द्वारा जोडिएका छन् र क्याम्पसमा घटनाक्रमहरूमा के भइरहेको छ भनेर वास्तविक समयमा देख्न सकिन्छ। यस अनुसार Mashable, मे २०१० मा, सेन्ट एडवर्ड्स युनिभर्सिटीले WHrrl प्रयोग गर्‍यो यसको स्नातक समारोहको सम्झना गर्न.
जियोलोकल एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्न विश्वविद्यालयहरूको लागि अन्य प्रोत्साहन भनेको स The्कलन गर्न सकिने डाटाको मात्रा हो। डाटाले देखाउँदछ कुन घटनाहरू सबैभन्दा बढी भइरहेको छ, डेमोग्राफिक्स, कलेज संस्कृति र विद्यार्थीले के जवाफ दिनेमा आधारित सूचित निर्णय गर्न सक्दछ। भू-अनुप्रयोग अनुप्रयोगहरू अँगाल्ने उच्च शिक्षा संस्थानहरू खेलको अगाडि हुनेछन् र यसका विद्यार्थीहरूसँग बहुमूल्य तरीकाले सम्पर्क गर्न सक्षम हुनेछन्।
टैग: कलेज घटनाहरुघटनाहरूफोरस्क्वायरभौगोलिक स्थानविश्वविद्यालयहरुविश्वविद्यालय कार्यक्रमहरू
दत्तक, गति, विस्तार
जनवरी १, २०१6१२::2011 अपराह्न
काइल, यस महान पोष्ट को लागी धन्यवाद। मिनेसोटाको मोउरहेडको सानो उदार कला कलेजमा म संचार विशेषज्ञ हुँ।http://foursquare.com/concordia_mn)। हामीसँग धेरै विद्यार्थीहरू प्रयोग गरिरहेको छैन तर हामी हाम्रो प्रयोगकर्ता आधारलाई विस्तार गर्ने तरिकाहरू खोज्दैछौं र आशा छ हाम्रो भर्तीलाई भ्याम्पे गर्दछ।
के तपाईं क्याम्पसमा विशेष वा सुझावहरू राख्न यो अझ महत्त्वपूर्ण लाग्नुहुन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? हामी सुझावहरू थप्न काम गर्दैछौं तर फोरस्क्वायरको प्रोत्साहन हिस्सा एकीकृत गर्ने तरिकाहरूमा संघर्ष गरिरहेका छौं। तपाइँसँग केहि सुझाव छ?
अप्रिल 30, 2012 मा 11: 04 एएम
विश्वविद्यालयबाट सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्ने सम्भावनाहरूको खोजीका लागि काइललाई धन्यबाद। उच्च शिक्षा क्रान्तिको तेर्सो पकड हो। यो सूचना प्रविधि भन्दा बाहिर र माथि छ तर ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान प्रक्रिया टेक्नोलोजी र ज्ञान उद्योगहरूमा आधारित छ।
'ज्ञान - उच्च शिक्षामा एक नयाँ क्रान्ति' विश्व विश्वविद्यालय फोरमको जर्नल ,,१,२०११: १-११ यी विषयहरूमा गहनताका साथ छलफल गर्दछन् म्याथ्युको ज्ञान खपत-उत्पादन, ज्ञान र ज्ञान उद्योगहरूको थियरीका अलावा। सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सम्झौता गरिन्छ http://www.slideshare.net/drrajumathew